ဟဒီးဆ်: ဧကန်မုချ အသင်တို့သည် ဤလပြည့်ဝန်းကို တွေ့မြင်ကြရသကဲ့သို့ အသင်တို့၏အရှင်မြတ်အား ဖူးမြင်ကြရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအရှင်မြတ်ကို ဖူးမြင်ရာတွင် အသင်တို့သည် တိုးဝှေ့ကြရမည် မဟုတ်ပေ။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: ဧကန်မုချ အသင်တို့သည် ဤလပြည့်ဝန်းကို တွေ့မြင်ကြရသကဲ့သို့ အသင်တို့၏အရှင်မြတ်အား ဖူးမြင်ကြရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအရှင်မြတ်ကို ဖူးမြင်ရာတွင် အသင်တို့သည် တိုးဝှေ့ကြရမည် မဟုတ်ပေ။
အမျိုးအစား: အကီဒဟ် ယုံကြည်ချက်။ . နောက်ဆုံးနေ့အပေါ် အီမာန်သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်း။ . နောင်တမလွန်ဘဝသက်တမ်း။ .
ဂျရီးရ် ဗင်န် အဗ်ဒုလ္လာဟ် အလ်ဗဂျလီ (ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်) နှင့်အတူရှိနေစဉ် ကိုယ်တော်မြတ်ကလပြည့်ည၏ လပြည့်ဝန်းကို ကြည့်ရှုပြီး မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ- ဧကန်မုချ အသင်တို့သည် ဤလပြည့်ဝန်းကို တွေ့မြင်ကြရသကဲ့သို့ အသင်တို့၏အရှင်မြတ်အား ဖူးမြင်ကြရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအရှင်မြတ်ကို ဖူးမြင်ရာတွင် အသင်တို့သည် တိုးဝှေ့ကြရမည် မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် အသင်တို့သည် နေမထွက်မီ(ဖဂျ်ရ်) ဆွလာသ် နှင့် နေမဝင်မီ(အဆွ်ရ်) ဆွလာသ်ကို (လက်လွတ်သည်အထိ မည်သည့်အရာ၏) လွှမ်းမိုးမှုမျှမခံရလေအောင် တတ်စွမ်းနိုင်သမျှ ပြုလုပ်ကြပါ။ အခြားဆင့်ပြန်ချက်တစ်ရပ်တွင် “ကိုယ်တော်သည် ဆယ့်လေးရက်ည လပြည့်ဝန်းကို ကြည့်ရှုတော်မူခဲ့သည်”ဟု လာရှိသည်။
ဂျရီးရ် ဗင်န် အဗ်ဒုလ္လာဟ် အလ်ဗဂျလီ (ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်မှာ ၎င်းတို့သည် တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်) နဲ့ အတူရှိနေခဲ့ကြသည်။ ကိုယ်တော်မြတ်သည် (ဆယ့်လေးရက်ည) လပြည့်ည၏ လပြည့်ဝန်းကို ကြည့်ရှုတော်မူပြီး မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ - “ဧကန်မုချ အသင်တို့သည် ဤလပြည့်ဝန်းကို တွေ့မြင်ကြရသကဲ့သို့ အသင်တို့၏အရှင်မြတ်အား ဖူးမြင်ကြရမည်ဖြစ်သည်။” ဆိုလိုသည်မှာ ကိယာမသ်နေ့ ဂျန္နသ်သုခဘုံတွင် မုအ်မင်န် သက်ဝင်ယုံကြည်သူများသည် လပြည့်ည၌ လပြည့်ဝန်းအား တွေ့မြင်ကြရသကဲ့သို့ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အား ဖူးမြင်ကြရမည်ဖြစ်သည်။ ဤအဓိပ္ပါယ်မှာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် လမင်းကဲ့သို့ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်တူသောအရာဟူ၍ မည်သည့်အရာမျှမရှိသည့်အပြင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် အကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်တော်မူသည်။ သို့သော် ၎င်း၏အလိုသဘောမှာ မြင်တွေ့ရခြင်းကိုသာနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြစ်ပြီး မြင်တွေ့ရမည့်အရာကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းမဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လပြည့်ည၏ လပြည့်ဝန်းကို သံသယမရှိ အမှန်တကယ် မြင်တွေ့ကြရသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့သည် အနန္တတန်ခိုးတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူသော ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသော အရှင်မြတ်အား လပြည့်ဝန်းကို မြင်တွေ့ရသကဲ့သို့ပင် သံသယမရှိ မျက်စိဖြင့် အမှန်တကယ်ဖူးမြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဂျန္နသ်သုခဘုံသားတို့အတွက် အရသာအရှိဆုံးနှင့် အမွန်မြတ်ဆုံး နိအ်မသ် စည်းစိမ်သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ မျက်နှာတော်ကို ဖူးမြင်ရခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းနှင့် တူညီသည့် နိအ်မသ်စည်းစိမ်ဟူ၍ မည်သည့်အရာမျှမရှိပေ။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖန်ဆင်းရှင်အား လပြည့်ည၌ လပြည့်ဝန်းအား တွေ့မြင်ကြရသကဲ့သို့ ဖူးမြင်ကြရမည်ဟုမိန့်ကြားတော်မူပြီးနောက် “ထို့ကြောင့် အသင်တို့သည် နေမထွက်မီ(ဖဂျရ်) ဆွလာသ် နှင့် နေမဝင်မီ(အဆွ်ရ်) ဆွလာသ်ကို (လက်လွတ်သည်အထိ မည်သည့်အရာ၏) လွှမ်းမိုးမှုမျှမခံရလေအောင် တတ်စွမ်းနိုင်သမျှ ပြုလုပ်ကြပါ”ဟုမိန့်ကြားတော်မူသည်။ “ဆွလာသ်ကို (လက်လွတ်သည်အထိ မည်သည့်အရာ၏) လွှမ်းမိုးမှုမျှမခံရလေအောင် တတ်စွမ်းနိုင်သမျှ”ဟူသည့်ဩဝါဒတော်၏ အလိုသဘောမှာ ထိုဆွလာသ်နှစ်ကြိမ်ကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ တာဝန် ကျေပွန်ကြပါ ဟူ၍ဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် ဂျမာအသ်ဖြင့် ဆွလာသ်ဆောက်တည်ခြင်းလည်းပါဝင်ပေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်တို့သည် ဤဆွလာသ်တို့ကို လက်လွတ်သည်အထိ မည်သည့်အရာ၏ လွှမ်းမိုးမှုမျှမခံရလေအောင် တတ်စွမ်းနိုင်သမျှအစွမ်းကုန် “ပြုလုပ်ကြပါ”ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ဖဂျရ်ဆွလာသ်နှင့် အဆွ်ရ်ဆွလာသ်ကို စွဲမြဲစွာဆောက်တည်ခြင်းသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ မျက်နှာတော်ကိုဖူးမြင်ခွင့်ရမည့် အကြောင်းခံများအနက်မှဖြစ်ကြောင်း ဤဩဝါဒတော်တွင် အထောက်အထားပါရှိသည်။
ဆွဟာဗဟ်များသည် တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)နှင့်အတူ ထိုင်ရန် စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။
အီမာန်ရှင်များသည် ကိယာမသ်နေ့တွင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကို ဧကန်မလွဲ ဖူးမြင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းကို အတည်ပြုတင်ပြထားသည်။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အား ဖူးမြင်ခြင်းကို အဓိပ္ပါယ် လွှဲပြောင်းဖွင့်ဆိုသူများ၊ ငြင်းပယ်သူများ၏ အဆိုနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့် အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော် မိန့်ကြားထားသည့်အတိုင်း အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အား အမှန်တကယ် ဖူးမြင်ရမည့် အကြောင်းအတည်ပြု တင်ပြထားသည်။
ဖဂျရ်ဆွလာသ်နှင့် အဆွရ်ဆွလာသ် နှစ်ကြိမ်၏ ထူးမြတ်မှုကိုတင်ပြထားသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းဆွလာသ်နှစ်ကြိမ်အား စွဲမြဲစွာဆောက်တည်ရန် လိုအပ်သည်။
ဤ(ဆွလာသ်)အချိန် နှစ်ချိန်အား သီးသန့်တင်ပြထားခြင်းမှာ မလာအိကဟ် ကောင်းကင်တမန်များသည် ထိုနှစ်ချိန်တွင် ဆုံတွေ့ကြပြီး ကျေးကျွန်များ၏ အမလ်ဆောင်ရွက်ချက်များကို (အရှင်မြတ်ထံ)ယူဆောင်သွားကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဤကြီးကျယ်လှသည့် ထူးမြတ်မှုအား လက်လွတ်မဆုံးရှုံးစေရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
လေးနက်စွာတင်ပြခြင်းနှင့် အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းတို့သည် ဒအ်ဝဟ် ဖိတ်ခေါ်မှု နည်းလမ်းများအနက်မှပင်ဖြစ်သည်။
အကီဒဟ် ယုံကြည်ချက်။ . နောက်ဆုံးနေ့အပေါ် အီမာန်သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်း။ . နောင်တမလွန်ဘဝသက်တမ်း။ .
အကြင်သူသည်အကြွေးဆပ်ရန် ခက်ခဲနေသူအား နောက်ဆိုင်းပေးထားမည် သို့မဟုတ် ကြွေးမြီတစ်စုံတစ်ရာကို လျှော့ပေးလိုက်မည်ဆိုလျှင် ကိယာမသ်နေ့တွင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ၎င်းအား မိမိပလ္လင်တော်၏ အရိပ်အောက်၌ အရိပ်ပေးတော်မူမည်။ ထိုနေ့တွင် ၎င်း၏အရိပ်မှလွဲ၍ အခြားမည်သည့် အရိပ်အာဝါသမျှ ရှိမည်မဟုတ်ပေ။